Kuningi okumelwe "kuqondiswe" ngamagama amalungu azovota - Mbete | News24
Kuningi okumelwe "kuqondiswe" ngamagama amalungu azovota - Mbete
eGoli - IPhini likaNobhala-Jikelele we-ANC uJessie Duarte utshele amalungu e-ANC ngomzuliswano wokuqala wokubhalisa ukuthi bangaphezu kuka-5000 abebengakabhaliswa nokusho ukuthi ngeke bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wosuku.
Abezindaba batshelwe ngo-22h00 ebusuku ukuthi uhlelo luzoqhubeka kahle ekuseni ngo-9 ngeSonto njengoba izifundazwe zisazokhetha kahle ukuthi ngobani okumele bafakwe.
NgoMgqibelo le nkomfa iqale ngemuva kwesikhathi ngenxa yokuthi kunamalungu abengakaqedi ukubhalisa ngoMgqibelo ekuseni enyuvesi yaseGoli kanti nobuholi bube nomhlangano okhethekile kulandela izinqumo zezinkantolo ngoLwesihlanu.
OLUNYE UDABA:I-ANC eNorth West ithi akusiwo wonke amagatsha avotele u-NDZ
USihlalo ophumayo uBaleka Mbete uthi kumele kuqondiswe kahle amagama abantu.
Inqubo yokuqinisekiswa kwamagama bekumele iqale ngemuva kwenkulumo kaMengameli uJacob Zuma, kodwa uthe eqeda, uMbete wamemezela ushintsho ohlelweni ethi eyamagama izolandela imiyalezo ethunyelwe yilabo abeseka lombutho.